Xasan Sheekh “Waa is-diiwaan geliyay, shahaadadii diiwan gelintane waan qaatay..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xasan Sheekh “Waa is-diiwaan geliyay, shahaadadii diiwan gelintane waan qaatay..” (DHAGEYSO)
Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Soomaaliya ahna musharax u taagan inuu markale xilkaasi qabto Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay wixii isaga iyo guddiga doorashada ku dhexmaray xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu iska diiwaan-geliyay tartanka doorashada madaxweynaha islamarkaana uu qaatay shahaadada is-diiwaan gelinta.
Wuxuu Xasan Sheekh sheegay in guddiga doorashada uu ku wargeliyay inuu ilaalin doonno nidaamka doorashada dalka islmarkaana uu yahay shaqsi ku faraxsan ka qeyb-galka doorashada.
Dhinaca kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay inuu aqbali doonno natiijo kasta oo kasoo baxda doorashada madaxweynaha ee dhici doonta 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.
“Waa is-diiwaan geliyay, shahaadadii diiwan gelintane waan qaatay, guddiga doorashadane waan la hadlay, waxaana u caddeeyay inaa ilaalin doonno nidaamka doorashada, anigoo ku faraxsan ayaana doorashadaasi ka qeyb-gali doonnaa” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii, Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay musharaxiinta kale inay u hogaansamaan nidaamka iyo shuruucda u degsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya, taas oo ay ku tartami doonaan musharixiin aad u badan.